Iprojekthi ye-Tomorrowland ye-Disney Disneyland ibekwe kwikona esemazantsi epaki, ukuze kugqitywe ngexesha lokwakha elicwangcisiweyo, udonga lwangaphakathi lokwahlulahlula kwakwenzelwe ukwakhiwa ngaxeshanye ngexesha lofakelo lwe-MEP. Ke, siyayamkela i-ringlock scaff yethu ...
Abathengi abaninzi bandibuza malunga nezinto ezisemgangathweni, kwaye abahlobo abaninzi abathenga i-ringlock scaffolding abazi ukuba kutheni sisebenzisa i-Q355 (Q345) kukhetho lwezinto ezisemgangathweni, ikwakhona imigangatho emininzi enesitampu sensimbi se-Q355. kwintengiso, kodwa ixutywe nezinto zeQ235 ....
Iindaba zokugqibela esithetha ngazo ngexabiso lesidibanisi seglasi yamanzi ngamaxesha ama-2 esisixhobo sokudibanisa isanti. Ke, amaqabane amaninzi aya kuziva edidekile, kutheni sisaqhubeka nokukhetha inkqubo yeglasi yamanzi? Makhe ndikubalisele ngezinye zeengxaki zezihlanganisi zesanti kwimarike yangoku: 01. Inkangeleko embi ...
Ukulahla yinxalenye yeendleko eziphezulu zezinto zokufaka i-Ringlock, umgangatho uchaphazela ngokuthe ngqo uzinzo kunye nokukhuseleka kwe-node yokunkqonkqoza kunye nobomi benkonzo yokugcwala, ngoko ke ekukhetheni i-castings, kufuneka sipholishe namehlo ethu. Namhlanje singathanda ukuthetha malunga ...
I-Ringlock Scaffolding kufuneka imiswe kwaye ichithwe ngokulandelelana okuthile.Abanye abantu bacinga ukuba ulwakhiwo kufuneka lwenziwe ngolandelelwano, kwaye akunamsebenzi xa uqhaqha, unokubhangiswa ngokunganyanzelekanga, enyanisweni, ukudilizwa kwenani lomnatha nalo iyimfuneko ukugxininisa okanye ...
Umjelo we-2021 waseCanton Fair oSasazwayo kushishino olunikezela
I-Rapid Scaffolding (Ubunjineli) Co., Ltd ithatha inxaxheba kwi-2021 yeCanton Fair Live Stream yoshishini lokunikezela nge-04/15 / 2021-04 / 24/2021, wamkelekile ukuba undwendwele umnquba wethu. Iwebhsayithi yomjelo obukhoma ngu https://ex.cantonfair.org.cn/pc/en/exhibitor/4ab00000-005f-5254-eae3-08d7ed79f5d1/ Wuxi Rapid ...
Ungamisa njani kwaye usebenzise isakhelo esikhuselekileyo ngokukhuselekileyo
Ukusetyenziswa ngokukuko kwetafile ukuqinisekisa ukhuseleko kuwe nakwabanye.Ukulungisa i-scaffolding yenye yeendlela zokusebenzisa iileli Enye inzuzo yokusebenzisa isakhelo sesakhelo kukuba ibonelela ngendawo enkulu yokusebenza kunye nokuhamba. iplfo ...
Ukuqeshisa i-Praffect ye-Scaffolding ye-Huaji Machinery Manufacturing Co.
Umzi-mveliso useWuxi, Jiangsu. Umzi-mveliso wahlulwe kabini, umasifundisane wokuvelisa kunye nokwakha iofisi. Ukuphakama komgangatho wokuqala weworkshop yimveliso eyi-10.95m. Ukuphakama kweendonga ezixineneyo zesakhiwo seofisi yi-16.5m. Ukuphakama kwenkqubo yenkxaso yefomwork ye ...
Ungaluphucula njani ulwazi lwakho lokhuseleko ngexesha lokutshixa
Yonke imboni kwihlabathi liphela ngoku ichaphazeleka bubhubhane be-COVID-19, hayi ubuncinci kumzi-mveliso wokukora. Xa kuziwa kubasebenzi abaqeqeshelweyo, bobabini abaqalayo kunye namava, uqeqesho lubaluleke kakhulu kuwo onke amabakala emisebenzi yabasebenzi. Iimeko ezikhoyo ngoku ...